Warbixin: Dugsiga Dangoroyo oo ka guulaystay dugsiga Mubaarak ee Dhahar – Radio Daljir
Agoosto 2, 2013 2:36 b 0
Bosaaso, Aug 02 – Barnaamijka Tartan iyo Tacliin wareegiisa sadexaad ayaa soo gaaray heer gabagabo, waxaana xalay ku tartamay dugsiyada sare ee Mubaarak oo ku yaala magaalada Dhahar iyo Dangoroyo Secondry oo ka dhisan degmada Dangoroyo.
Labada dugsi ayaa sanadkaan markii ugu horaysay ka qaybgalay barnaamijkaan, waxaana nasiib ay u yeesheen inay sooo gaaraan wareega sadexaad ee barnaamijka oo ay kusoo tartameen 24-dugsi.
Tartanka oo xalay xiiso gaar ah xambaarsanaa ayaa waxaa uu kusoo gabagabaoobay lix iyo sagaal darajo oo ay guushu ku raacday dugsiga Dangoroyo Secondary Maxamed Cali Maxamed oo ka mid ah gudiga barnaamijka Tartan iyo Tacliin ayaa natiijada ku dhawaaqay.
Wareega sadexaad dugsiyada kusoo tartamay ee hadda u taagan seminaalka ayaa waxaa ay kala yihiin Shaafici Bosaaso,? Al-Nuur Baran, Dangoroyo socondary, waxaana caawa lasoo gabagabaynayaa wareegan sadexaad oo ay ugu dambatyyn ku tartamayaan Cumar Samatar Gaalkacyo iyo Xamdaan Bosaaso.
Barnaamijka Tartan iyo Tacliin ayaa waxaa si wadajir u maalgalinaya wasaaradda waxbarshada dowlada Puntland, shirkadda isgaarsiinta ee Golis, Bankiga Salaam iyo daladda PEN oo isku soo dubaridka su’aalahan leh, waxaana barnaamijka si toos ah u baahiya soona abaabulay Radio Daljir oo xarumihiisa kale duwan si toos ah looga dhagaysto.